सुनसरी प्रशासनको निर्णय प्रति इटहरी उपमहानगरको असन्तुष्टि - Saptakoshionline
सुनसरी प्रशासनको निर्णय प्रति इटहरी उपमहानगरको असन्तुष्टि
प्रकाशित मिति: बुधबार, भाद्र १७, २०७७ समय: १०:०४:३४
बुधाबार सुनसरी प्रशासनले जिल्लाभर लागु रहँदै आएको निषेधित क्षेत्र आज रातीबाट खुकुलो पार्ने निर्णय गरेसंगै इटहरी उपमहानगरपालिकाले भने असन्तुष्टि जनाएको छ । जिल्ला प्राशासन कार्यालय सुनसरीको निर्णय प्रति इटहरी उपमहानगरपालिले असन्तुष्टि जनाएको हो । इटहरी तिव्र रूपमा संक्रमण फैलिरहेको समयमा प्रशासनले निषेधित क्षेत्र खुकुलो पार्ने निर्णय रहेकोमा उपमेयर लक्ष्मी गौतमले असन्तुष्टि जनाएकी छन् । उनले सामाजिक संजानल मार्फत नै प्रशासनलको निर्णय गलत भएको बताएकी छन् ।
बिहिना १० बजे भन्दा अगाडि मात्र बजार खोल्दा झन जोखिम बढ्ने उनको भनाइ छ । त्यसैगरी उनले स्थानिय स्वास्थ मापदण्ड बनाएर लागु गरेर त्यसको कडा अनुगम गर्नु पर्नमा जोड दिएइ छन् । उनले सि डि ओ साब र उद्योग बाणिज्य संघ खोलेपछी पूरा दिन खोल्नु राम्रो भनेर लेखिकि छन् ।
यसलाइ हेर्दा जिल्ला प्रशासनले इटहरी उपमहानगर संग परामर्श नगरेको देखिन्छ । उनले भोलि संक्रमण फैलिएर नियन्त्रण बाहिर गए स्थानीय सरकालाई दोष नदिन समेत भनेकी छन् । उनले भनेकी छन् “फुट्पात मा अनुगमन गर्न छिर्न सकिने अबस्था रहदैन ! फुट्पात को भिड कन्ट्रोल कस्ले गर्ने? खोइ मापदण्ड ??” इटहरीमा बुधबार मात्र ५८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । त्यस्तै संक्रमण समुदाय सम्म फैलिएको अनुमान गरिएको छ । यो अवस्थामा स्थानिय सरकार र केन्द्र सरकार मातहतको जिल्ला प्रशासन बिच समन्वय नहुदा महामारी नियन्त्रण झन जटिल बन्द सक्छ ।